नेपालमा हुन लागेको निर्वाचनप्रति भारत खुसी- विदेश मन्त्री स्वराज « प्रशासन
नेपालमा हुन लागेको निर्वाचनप्रति भारत खुसी- विदेश मन्त्री स्वराज
काठमाडौँ । नेपालमा आगामी हप्ता हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनप्रति भारतले खुसी व्यक्त गरेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग आज नयाँ दिल्लीमा भएको द्विपक्षीय औपचारिक भेटमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपालमा हुन लागेको निर्वाचनप्रति खुसी व्यक्त गरेकी हुन् । उनले मन्त्री डा. महतसँग एउटा ठूलो लोकतन्त्रका हैसियतले आफ्नो छिमेकी मुलुक नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत हुन लागेको महत्वपूर्ण प्रजातान्त्रिक अभ्यासले भारतलाई अत्यन्त खुसी लागेको बताइन् ।
उनले नेपालको निर्वाचनको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै निर्वाचनका लागि भारतले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन् । विदेशमन्त्री स्वराजले पछिल्लो समयमा दुई देशबीच उच्चस्तरीय भ्रमण तथा भेटघाट भएका र यसबाट आपसी सम्बन्ध सुदृढीकरणमा थप सघाउ पुगेको धारणा राखिन् ।
सो अवसरमा मन्त्री डा. महतले नेपालको निर्वाचनका लागि भारतले पु¥याएको सहयोगका लागि धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए । भेटका क्रममा नेपाल–भारत सम्बन्ध र द्विपक्षीय हितका विविध विषय र नेपालका राष्ट्रपतिको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणका बारेमा पनि कुराकानी भएको थियो । सो क्रममा द्विपक्षीय सहयोगका आयोजनाका बारेमा समीक्षा गर्दै समयमै सम्पन्नताका लागि उनीहरुले जोड दिए ।
सो भेटमा मन्त्री डा. महतले यसअघि नेपाल र भारतका मन्त्रिस्तरीय बैठकमा भएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्न र संयुक्त संयन्त्रको कार्यलाई थप प्रभावकारी रुपमा अघि बढाई आपसी हित प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा काम गर्न सक्नेगरी उपयोग गर्न आग्रह गरे ।
डा. महत भारतीय राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित नेपालका लागि विभिन्न मुलुकका गैरआवासीय राजदूतको सम्मेलनको उद्घाटनका लागि शुक्रबार बिहान नयाँ दिल्ली पुगेका हुन् । शुक्रबार साँझदेखि सुरु हुने उक्त सम्मेलनमा नयाँ दिल्लीस्थित नेपाल हेर्ने ७० भन्दा बढी देशका राजदूतको सहभागिता रहनेछ ।
नेपालले पहिलो पटक गर्न लागेको सो सम्मेलनमा नेपालको आर्थिक कूटनीतिअन्तर्गत आर्थिक विकास, परराष्ट्र सम्बन्ध, व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धन, पर्यटनलगायत विषयमा परराष्ट्र सचिव शङ्करदास वैरागीसहित यस क्षेत्रका नेपाल र भारतका विज्ञको प्रस्तुति रहनेछ । मन्त्री डा. महत शनिबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहने परराष्ट्रमन्त्रीका प्रेस संयोजक एकराज पाठकले जानकारी दिए । रासस
Tags : परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत भारत स्थानीय तहको निर्वाचन